भ्रष्टाचारको अ’भियोग लागेका ट्राफिक प्रहरी हाकिमको घरमा सुनको ट्वाइलेट ! – Dainik Sangalo
भ्रष्टाचारको अ’भियोग लागेका ट्राफिक प्रहरी हाकिमको घरमा सुनको ट्वाइलेट !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १५, २०७८ समय: १७:५४:०५
जब प्रहरी अलेक्सीको घर पुगे उनीहरु आश्चर्यमा परे। कारण, उनको घरको ट्वाइलेट पनि सुनले बनेको देखियो। दक्षिणी क्षेत्र स्टा’भरोपोलमा रहेको अलेक्सीको घर आलिसान थियो। त्यहाँका कोठाहरु ठूला–ठूला थिए भने सजावटका सामग्री, फर्निचर निकै महँगा थिए।
उनले का’लोधनको यति आ’र्जन गरे उनलाई शौ’च गर्नसमेत सुनको ट्वाइलेट चाहियो। प्रहरीमै रहँदा उनले एउटा आपराधिक स’मूहको नेतृत्व गरेको बताइएको छ। उनले विभिन्न चे’कपोइन्टमा अ’वैध सामग्रीहरुको गाडीमा खो’जतलासी गर्दैन थिए।
यतिबेला रुसको अनुसन्धान समितिले उनीमाथि १९ मिलियन रुबलभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अ’भियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। छानबिन समितिले सफोनोभको भव्य निवासको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ घरभित्रको सुनको ट्वाइलेट देखि घरबाहिर पार्किंग गरिएका लक्जरी कारहरु देखिन्छन् ।
उनको घरमा रहेका फर्निचर, भित्ते आर्ट फ्रेम तथा सजावटका सामानहरुमा सुनको व्यापक प्रयोग गरी असाधारण बनाइएको छ । भान्साकोठाको दराज तथा अन्य फर्निचरमा पनि सुनको प्रयोग गरिएको छ ।गत जुलाई २० मा अपलोड भएको ४९ सेकेण्डको युट्युब भिडियो एक लक्जरी रियल स्टेट विज्ञापन जस्तै देखिन्छ ।
अहिलेसम्म उक्त भिडियो लाखौँले हेरिसकेका छन् ।स’फोनोभ उनका अन्य ६ सहकर्मी ट्राफिक पु’लिसहरुमाथि अ’वैध रुपमा ठूला सवारी साधन सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुलाई नक्कली अनुमति प्रदान गर्ने र त्यसबापत वार्षिक १ करोड ९० लाख रुसी रुबल घु’स लिने गरेको अ’भियोग छ ।
Last Updated on: October 1st, 2021 at 5:54 pm